Ijaarashada guri - Consumer Affairs Victoria
Consumer Affairs Victoria »Resources and education »Other languages »Arrimaha Macmiilaha ee Fiktooriya »Your renting rights
Bilaabida kiraysiga Inta aadan bilaabin kiraysiga, waxaad u baahan doontaa inaad hesho heshiiska kiraysiga oo qoran ama af ah aadna haysato lacag kugu filan oo lagu bixiyo curaarta (bond).
Heshiiska kiraysiga (waxa kale oo loogu yeeraa ijaarasho) waa cahdi u dhexeeya adiga iyo qofka leh guriga aad ijaaranayso. Wuxuu muujiyaa ijaarka, curaarta, mudada iyo nooca kiraysiga iyo xaalladaha kale iyo shuruucda.
Xaqiiji inaad fahamtay wax walba oo ku yaalla heshiiska kiraysiga ka hor intaadan saxiixin.
Waa inaad heshaa qofka guriga leh faahfaahintiisa.
Dadka guryaha leh badankood waxay ku weydiin doonaan inaad bixiso curaar. Haddii aad ka dhigi weyso guriga nadiif, waxyeesho guriga ama lagugu leeyahay ijaar dhamaadka kiraysiga, cidda aad guriga ka degan tahay waxay qaadan kartaa qayb ka mid ah ama dhamaan curaarta.
Haddii qofka aad guriga ka degan tahay qaato curaarta, waxaa waajib ku ah:
Inay ku xereeyaan xafiiska hay’ada Residential Tenancies Bond Authority Inay ku siiyaan foomka xeraynta curaarta si aad u saxiixdo
Inay diyaariyaan warbixinta guriga, taas oo muujinaysa xaallada guriga. Inaad la xiriirto xafiiska hay’ada Residential Tenancies Bond Authority haddii aadan ku helin risiitka curaarta muddo 15 berri ah gudahood. Risiitka curaartaadu waa muhiim – ha iska lumin. Marka kiraysigaagu dhamaado waxaad u baahan doontaa risiitka si aad u dalbato in laguu soo celiyo curaarta.
Cidda aad guriga ka degan tahay waa inay ku siiyaan laba koobi oo saxiixan intaadan guriga u guurin. Iska hubi guriga inuu amaan yahay una sheeg ciddaad guriga ka degan tahay haddaad dareentay wax khatar ku ah aminga guriga, sida deyrka harada biyaha oo aan amaan ahayn ama dhibaato muuqata oo korontada. Eeg guriga ka dibna buuxi foomka, adiga oo xusaya dhaawac kasta oo ku yaalla sida dilaac, calaamado derbiga ah, ama handaraab jaban. Sidoo kale ku xus warbixinta haddii aad diidan tahay waxa qofka guriga leh ama wakiilku gurigu soo qoreen. Ku celi hal koobi oo saxiixan oo warbixinta guriga ah cidda guriga leh ama wakiilka guriga saddex maalmood ka dib markaad u guurto.
Xafid koobiga xaallada warbixinta guriga. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato dhamaadka kiraysiga haddii uu jiro muran ka taagan cidda bixinaysa nadiifinta, khasaarada gaartay guriga, iyo kharajka bedelida sheyga maqan.
La xiriir shirkadaha bixiya biyaha, korontada, gaaska iyo telefoonka si aad u xaqiijiso inay xiran waqtigaad u guurayso. Guud ahaan, waa masuuliyaadada inaad qabanqaabiso adeegyadaan aadna bixiso biilasha. Mudada kiraysiga
Waxaa jira masuuliyaad iyo waajibaad markaad kiraysanayso guri.
Ijaarka ku bixi waqtigiisa. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho risiitka lacag bixinta. Guriga mid nadiif ah ka dhig intii karaankaaga ah. Haddii aadan sidaas samayn, ama aad guriga wax u gaysato, waxaa laga yaabaa in aadan helin dhamaan lacagtii curaarta ahayd marka kiraysigu dhamaado.
Ha cusboonaysiin, ha bedelin ama dib ha u qurxin guriga adiga oo aan ogolaansho ka helin cidda guriga leh.
Ixtiraam barayfasiga iyo nabada jaarkaaga, xaqiijina in cidda ku soo booqanaysaa sidaas oo kale samayso. Cidda guriga leh ama wakiilku waxay xaq u leeyihiin inay galaan guriga, laakiin waa inay ku siiyaan ugu yaraan 24 saacadood oo ogeysiin ah oo qoran kuuna sheegaan sababta ay u doonayaan inay guriga galaan. Liiska sababaha la ogol yahay waxaa lagu qoray bogga Gelida ee cidda guriga leh ama wakiilka. Waxay kaloo geli karaan guriga waqti iyo maalin la isla ogol yahay waase in aanay ka badnaan todoba berri heshiiska ka dib. U sheeg cidda aad guriga ka degan tahay ama wakiilka wixii ku saabsan dayactirid ay tahay in la sameeyo. Dayactir degdeg ah La xiriir wakiilka guriga ama cidda guriga leh haddii aad u baahan tahay dayactir degdeg ah. Dayactirka degdeg ahi waa xaalladaha ka dhigi kara guriga mid aan lagu noolaan karin; tusaale, cilad ka jirta deyrka harada dabaasha, qalabka korontada, ama kulayliyaha, adeega biyaha oo dilaacsan, saqafka guriga oo si xun darooraya, gaaska oo daadanaya ama musqusha oo jaban. Waxaad ka heli kartaa liiska oo dhan bogga Dayactirka degdega ah. Cidda guriga leh ama wakiilku waa inuu uga jawaabaa si degdeg ah codsiga dayactirka degdega ah.
Haddii aadan ka helin jawaab degdeg ah cidda guriga leh ama wakiilka, waxaad u idman tahay inaad dayactir ku bixiso ilaa $1800. Hay dhamaan risiityada diiwaangelina ku samay inaad isku dayday inaad hesho dayactir degdeg ah. Waxaad siin kartaa cidda aad guriga ka ijaaratay ama wakiilka ogeysiin aad ku weydiisanayso inay kuu celiyaan qiimaha dayactirka degdegta ah. Foomamka waxaa laga helli karaa bogga Foomamka iyo qoraallada.
Haddii aadan bixin karin dayactir degdeg ah, qiimaha dayactirkuna ka badan yahay $1800 ama cidda guriga iska lihi diido inay bixiso, waxaad wici kartaa Consumer Affairs Victoria wixii talo ah. Dayactirka aan degdegta ahayn
U dir cidda guriga leh ama wakiilka codsiga qoran oo dayactirka aan degdegta ahayn. Waxaad qori kartaa warqad ama u diri kartaa email ama isticmaal foomamka laga helli karo bogga Foomamka iyo qoraallada. Hayso dhamaan warqadaha, emaylada, qoraallada fariinta iyo warbixinada, si haddii dhibaato timaado ama khilaaf, aad hesho caddaynta falalkaaga iyo codsiyadaada.
Wac Consumer Affairs Victoria haddii cidda guriga leh ama wakiilku aanay waxba ka qaban dayactirka 14 berri gudahood marka ogeysiinta la bixiyey.
Ka bixida kiraysiga
Markaad doonayso inaad ka guurto guriga aad degan tahay, waxaa waajib kugu ah inaad siiso cidda aad guriga degan tahay mudada ogeysiinta loo baahan yahay kagana baxdo guriga xaallad wanaagsan oo nadiifa.
U sheeg cidda aad guriga ka degan tahay markaad rabto inaad ka guurto guriga.
Ka hubi xarunta hal-abuurka farshaxanka ee qoysaska leh carruur gaaraya 12 sanadood. Waxaa xafiiskayagu ku yaalla meel u jirta shan daqiiqo Consumer Affairs Victoria si aad u ogaato ogeysiin intee le’eg ayaad u baahan tahay. Taasi waa isbedeshaa iyada oo ku xiran xaalladaada. Kala hadal soo celinta curaarta qofkaad guriga ka degan tahay ama wakiilkiisa.
Buuxi foomka curaarta kuna soo celi Residential Tenancies Bond Authority. Foomka waa inuu saxiixaan adiga, qofka guriga leh ama wakiilkiisa. Ha saxiixin foomka curaarta haddii aadan ogolayn inta qofka guriga lihi kugu sheeganayo. La xiriir Consumer Affairs Victoria wixii talo lacag la’aana. Marna ha saxiixin foom aan buuxin oo curaarta. Bixi ijaar kasta oo lagugu leeyahay iyo biilasha.
Nadiifi guriga qaadano waxaad leedahay oo dhan.
Hay warbixinta xaallada guriga si ay kuu anfacdo haddii khilaaf yimaado.
U dhaaf cinwaan iyo nambar telefoon oo uu kaa soo waco wakiilka guriga ama kan leh.
Waxyaallaha muhiimka ah ee la xasuusanayo
Marna waxba ha saxiixin ilaa aad ka fahamto waxa looga jeedo.
Weligaa ha saxiixin foom aan wax ku qornayn, xataa haddii uu u eg yahay mid rasmi ah. Hayso koobi wax kasta oo aad saxiixdo.
Weydiiso risiitka mar kasta oo aad bixiso wax.
Ku hayso meel amaan ah risiitka curaarta iyo risiityada kale ama dayactirada.
Ka raadi talo lacag la’aana Consumer Affairs Victoria haddii aad qabto wax su’aal ah.
Macluumaad intaas ka badan oo kiraystayaasha ee afka Soomaaliga, booqo websaytka Ururka Kiraystayaasha reer Fiktooriya (Tenants Union of Victoria TUV website). Ururka Kiraystayaasha reer Fiktooriya (TUV) ayaa iyaguna siiya macluumaad kiraystayaasha guryaha dadweynaha iyo gurisiinta bulshada.